लकभन्दा मालझिमिमक्कैको चर्चा वढि (भिडियोसहित) -TokyoNepal.com
Tuesday, 21 May 2013Nepal Time: 03:10 PMJapan Time: 06:25 PM
लकभन्दा मालझिमिमक्कैको चर्चा वढि (भिडियोसहित) ‘देखाइदिन्छु सबै कुरा पैसा तिरेपछि , जिन्दगीमा मोजमस्ती गर्नैपर्छ राति, गाला मेरो फुटेको छैन अलिकति चर्को हो साथी, आँखा झिमिक्कै माल सामान गायब’’ यो थितकत्त वोलले नै प्ष्ट पारदैन कि यो कसतो कथावस्तुमा लेखिएको गीत हो । यसले के भन्न खोजेको हो ? तर गीत् हो चलचित्र ‘लक’को । तर, चलचित्रको नामभन्दा पनि यो गीतले चर्चा पायो बजारमा । चलचित्र चलेर उत्रिसक्दा पनि यो गीतले गरम बनाएको बजार अझै सेलाएको छैन । यता थुप्रै सिनेमा खेल्दा पनि चर्चा कमाउन नसक्ने अनि नाम पनि त्यति बजारमा ल्याउन नसक्ने कलाकारहरूलाई पनि प्रस्तुत ‘आइटम डान्स’मा डान्स गर्ने सम्झना प्याकुरेल उदाहरण नै बनिन् । उनी यही एउटा गीतबाट चर्चामा आएकी छिन् यतिबेला ।
यो गीतप्रति चासो राख्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि निर्देशक ऋषि न्यौपानेले चलचित्र ‘लक’को रिलिज पनि गरिहाले । ‘हामीले दर्शकहरूको भावना बुझेर नै रिलिज गर्‍यौँ चाँडो । चलचित्रले परिणाम पनि राम्रै निकाल्यो,’ निर्देशक न्यौपाने भन्छन् । एउटै गीतबाट चर्चामा आएकोमा सम्झना पनि धेरै खुशी छिन। तर, यो गीतलाई विभिन्न कोणबाट हेरिदिएर गलत अर्थ लगाउनेहरूप्रति पनि उनको चित्त दुखाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘हामीले शब्दलाई साङ्केतिक रूपले प्रस्तुत गरेका छौँ । तर व्याख्या भने सीधै गरियो । म बारमा डान्स गर्ने युवती हुँ । त्यहाँ खलनायकहरूले सामान लुकाएका हुन्छन् र त्यो सामान मैले देखेकी हुन्छु । सबै कुरा देखाइदिन्छु पैसा तिरेपछि भनेर प्रहरीलाई गीतमार्फत जानकारी दिन खोजिएको छ । यहाँ त शरीर देखाउने कुरा पो आयो,’ उनले बेलिविस्तार लगाइन् ।
सुरुमा त सम्झनाले पनि सोचेकी थिइनन् कि यो गीतले यस्तो हंगामा गर्ला भनेर । ‘नसोचेको भयो,’ उनी दङ्ग पनि छिन् । तर, बजारमा हिँड्दा दर्शकले ‘पैसा तिरेपछि सबै कुरा देखाइदिने हो’’ भनेर जिस्क्याउँदा भने उनको चित्त दुस्खेको रहेछ । उनले भनिन्, ‘यो आइटम गीतमा नाचेपछि चर्चा त पाइयो तर पछिसम्म गलत छाप पर्ला कि भन्ने चिन्ता भने लागेको छ । म दर्शकहरूलाई मैले नाचेको गीतलाई गलत अर्थले नबुझिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कलाकार भएपछि हरेक भूमिकामा सहज प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनको छ । सम्झनाले थपिन्, ‘अब भने म आइटम तिर भन्दा पनि नायिकाको भूमिकातिरै बढी जोड दिन्छु । आइटमले छोटो समयमा नै चर्चा त पाउँछ तर त्यो दिगो हुँदैन रहेछ ।’ हेर्नुहोस् भिडियो …
फिल्म फेस्टिबलमा छोरीको साथ देखिइन् ऐश्वर्या
बलिउड अभिनेत्री चित्रांगदाको डिभोर्स
अन्ततः जेल जाने नै भए सञ्जय
धरापमा पुजनाको करियर
ईशाले पाइन् नयाँ प्रेमी
रामकृष्णको जिन्दगी, ओराली लागेको हरिणको चाल भो
गिनेथ बनिन् विश्वकै ‘सुन्दर’ महिला
निशा अधिकारी पुगिन् सगरमाथाको शिखरमा
पूर्वसभासद सदरुल मियाको विभत्स हत्या
माउरिन्होले रियल मड्रिड छाड्ने
हरियो तरकारीमा विषैविष !
म्यानपावर व्यवसायीले भने,’९९ प्रतिशत श्रम सम्झौता नक्कली बनाउँछौं’
सेवा परिवर्तन गर्दा जागिरै चट
एनआरएनद्वारा बुद्धको प्रतिमा बनाउन एक करोड सहयोग
झलनाथ भन्छन्,’अबको ठूलो पार्टी एमाले नै हो’
थ्रेस होल्ड र संख्यामा सम्झौता हुँदैन : महत
नायक अर्जुन कार्की चढे सगरमाथाको शिखरमा
थापा भन्छन्,’केही दललाई क र ख श्रेणीमा राखेर चुनाव हुन सक्दैन’